Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul | RayHaber | raillynews
HomeMagaalada Istanbul ee caasimada
Si loo yareeyo cufnaanta abuuraya safka waqti ka waqti xarumaha xarumahab eeb ee "b ", IMM waxay gelisaa İşlem Mobile Trading Point araç qalab. Xarunta codsi ee wareega, oo markii ugu horaysay laga hirgaliyay magaalada Üsküdar, waxay adeegtaa celcelis ahaan 120 qof maalintii. [More ...]
Golaha IMM wuxuu ansixiyay wareejinta taargoyinka hal-abuurnimo ee jasiiradaha loo yaqaan 'Princess' Islands loona wareejiyo IMM 300 TL. Golaha Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul (IMM) ayaa saxeexay go'aan muhiim ah ajandahana muddo dheer. [More ...]
Goobaha dhulka hoostiisa mara ee Dudullu-Bostancı ee Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul, shaqaalaha amniga ee Shirkadda Maareynta Himilo, oo ah qandaraasle hoosaad ka ah Shirkadda Dhismaha ee Senbay-Kolin-Kalyon, ayaa lahadashay Shabakadda Maamulayaasha. Qof ayaa shaqada laga eryay qiyaastii 3 bilood ka hor. [More ...]
Thanks to tallaabooyinka ay qaaday IMM, tirada shilalka basaska ku xiran IETT ayaa si aad ah hoos ugu dhacay marka la barbar dhigo sanadkii hore. IETT, Bus Inc. iyo Gawaarida Dadweynaha ee Gaarka loo leeyahay ayaa ku lug lahaa 14 shilal, [More ...]
IMM waxay go’aansatay inay balaadhiso ololaha lacag-dhimista iyadoo la adeegsanayo Istanbulkart iyo kaarka deynta oo laga bilaabay baarkiyada gawaarida ISPARK illaa iyo 31-ka Maarso iyadoo la raacayo baahida weyn ee shacabka. Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM), si loo dardar galiyo qulqulka taraafikada [More ...]
IMM waxay dhistay goob cusub oo degitaan ah iyo jaranjarada si loo yareeyo cufnaanta rakaabka ee Altunizade Metrobus Station. Markii la furay Yamanevler - Çekmeköy Metro, tirada maalinlaha ee rakaabka ee Altunizade waxay ka korodhay 17 kun ilaa 35 kun. Istanbul [More ...]
Jawaabta IMM ee ku saabsan Bayaanka deynta metro ee Wasaaradda Lacagta iyo Maaliyadda!
Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul, Wasaaradda Lacagta iyo Ansixinta 'ansixinta' ayaa ka jawaabtay bayaanka. Hadal ahaan, mashruucyada bulsh-garaynta ee 'IMM' waxaa laga saaray Barnaamijka Maalgashiga Dadweynaha iyada oo laga duulayo Istaraatiijiyada Madaxtooyada iyo Madaxtooyada Miisaaniyadda, in kasta oo khasnadda ay ku jirto. [More ...]
Wasaaradda Lacagta iyo Maaliyadda: 'IMM ma aysan weydiisan oggolaanshaha deynta' Metro '
Wasaaradda Hantidhawrka iyo Maaliyaddu waxay u soo bandhigtay Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbuul Wasaaradda ama ay u diidday Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul bishii Janaayo ee sannadkan oo ku saabsan diidmada dalabka amaahda ee Madaxweynaha Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul Ekrem Imamoglu. [More ...]
Duqa Magaalada Istanbul Ekrem İmamoğlu ayaa ku dhawaaqay inaysan bilaabi karin maxaa yeelay ma heli kareen ogolaashaha qasnadda in kasta oo ay heleen dhibco; Eminönü-Alibeyköy Tram Line, Bostancı-Dudullu Metro Line iyo Yenidoğan-Hospital Line ayaa la bartay. Madaxweynaha [More ...]
Shirkadaha Dawladda Hoose ee Magaaladda Istanbul (IMM), TCDD Haydarpasa iyo saldhigyada Sirkeci inay kireystaan ​​aagagga bakhaarka kadib markay si sharci darro ah u tirtireen hindisada iyo fulinta qandaraaska iyadoo la codsanayo in la kansal gaabiyo fulinta kii u horreeyay. [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM) Sözcüsu Murat Ongun, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan Istanbul Basaksehir ayaa ka furi doonta isbitaal ku yaal magaalada oo ku saabsan tareenka dhulka hoostiisa ah si loo gaaro hadalada looga jawaabayo xisaabta warbaahinta bulshada. Ongun, “Qaar ka mid ah Wasiirradeenna, [More ...]
Ekrem İmamoğlu, Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Magaalada Istanbul ayaa ka qeyb galay Shirka Bulshada Rayidka ee Turkiga. Barnaamijka kahor, saxaafaddu waxay ka jawaabtay su'aalaha xubnaha ajandaha. İmamoğlu, oo ah suxufi, Wasiirka Gaadiidka Cahit Turhan, "madaxweynaha IMM [More ...]